WAR WEYN: Cristiano Ronaldo Oo Talyaaniga Ku Laabtay, Sirta Ka Dambaysa & Fursadiisa Cusub Ee Kulanka Barcelona - Gool24.Net
WAR WEYN: Cristiano Ronaldo Oo Talyaaniga Ku Laabtay, Sirta Ka Dambaysa & Fursadiisa Cusub Ee Kulanka Barcelona
Weeraryahanka xulka qaranka Portugal iyo kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo ayaa u duulay dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada saldhiga u ah kooxdiisa ee Turin saacado kaddib markii laga helay xanuunka Korona Fayras.
Inuu Ronaldo u duulay Talyaaniga oo uu ka tagay dalkiisa Portugal ayaan ahayn mid iska timid balse uu ka wato qorshe weyn oo uu doonayo inuu diyaar ugu noqdo kulamada kooxdiisa gaar ahaan kulanka Champions League ee Barcelona.
Ronaldo ayaa haysta fursada uu markale kaga hortagi doono kooxdii uu mudada dheer Spain kula soo xifaaltamayay iyo ninka ay figta ugu sarreysa kubadda cagta wada-joogaan ee Lionel Messi balse xanuunkiisa ayaa shaki gelinaya.
In Ronaldo uu u duulay Talyaaniga ayaa ka dhigan inuu haysto fursad weyn oo uu kaga hortago Barcelona iyo waliba kulanka kasoo horreyn doona ciyaartaas ee ay Juventus la yeelan doonto dhigeeda Verona.
Sirta ka dambaysa in CR7 ka tago dalkiisa Portugal ayaa ah in Portugal karantiinka Korona Fayras 14 maalmood la galo halka Talyaaniga kaliya 10 maalmood aad karantiinka ku jirayso waana sababta uu diyaarka ugu noqon karo kulamada Verona iyo Barca.
Sharciga UEFA ayaa ah in ciyaaryahanka ka qayb qaadanaya kulan Yurub ah uu noqdo mid ka bogsada Korona Fayras toddoba maalmood kahor ciyaartaas waana mida uu dadaalkeeda haatan galay Ronaldo.
In shalay oo 13-kii October ahayd laga helay xanuunka ayaa ka dhigan in Talyaaniga tijaabo lagu marin doono 23-ka bisha isla markaana haddiiba uu kulanka Serie A-da ah ee Verona ciyaaro ay jiri karto fursad uu Barca kaga hortagaa.
Waxyaabaha cajiibka ah ayay kamid tahay in xanuunka laga helay Ronaldo uusan kaliya saamayn ciyaareed yeelan balse deg-deg dhaqaale ahaan loo dareemay kaddib markii uu 3% khasaare galeen shuraakooyinka (Shares) lagula jiro Juventus.